Ireo Feonkira Folo Tsara Indrindra Rehefa Krismasy Ao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2019 8:12 GMT
Ny ‘Poinsettias’ mena dia voly malaza fanao anaty tavim-boninkazo, indrindra rehefa manakaiky ny fotoanan'ny Krismasy; sary an'i Guilherme Cardoso, CC BY-NC 2.0.
Ireo fetin'ny Noely ao Trinidad sy Tobago dia fifangaroana mahagaga an'ireo fianakaviana, namana, sakafo ary fialamboly, avondron'ny laro iray manokana: ny mozika! Adinoy ny Jingle Bells sy ny Tonga ao an-tanàna i Santa Claus ; IFeno tsiro Karaibiàna ireo voafantina amin'ny fety ao an-toerana, miainga amin'ireo fitsangatsanganana mahazatra mankamin'ny soca parang.
Ireto no safidinay (tsy misy filaharany manokana) ho an'ireo santionany tena avy eo an-toerana rehefa tonga io vanim-potoana io. Raha tsy misy azy ireo, dia… tsotra fotsiny, tsy ho Noely Trini mihitsy!
1. Misotro Raoma – Lord Kitchener
Ity no hira mety tena ahafantarana indrindra ny Noely Trinbagoniàna. Hatramin'ny fotoana izay nihiran'ilay “tompon”ny calypso mafy ny “Mooma, mooma…” nahatsapa izahay rehetra ho toy ny nanjohy ny ‘zanany lahy’ ho any amin'ny firenena reny, ho fay anie ny ririnina mamirifiry! Kitchener, heverina ho mpilalao lehibe indrindra ny calypso taorian'ny ady lehibe, maneho tsy misy tomika ny fahatsapan'ireo taranaka Windrush hoe tsy voatazony intsony ny maha-izy azy ireo – indrindra rehefa Noely – ary manome azy ireo amim-pahankingàna ny fahafahana mandresy azy io amin'ny fitahirizana ireo kolontsaina nentindrazana nolalaina : “Misotroa raoma sy punch crema, misotroa raoma… tsy misy fotoana hangovitana!” Na dia ao anatin'ny hevitry ny Noely mangitsy sy matroka ao Londra aza, dia hanafàna ny fonao io hira io.
2. Oh Raha Mba Afaka Niverina ho Zazakely Indray Mantsy Aho — Kelwyn Hutcheon
Ny tena fandikan'i Trinidad manokana an'i Frank Sinatra, ny gadona mandrotsirotsin'i Hutcheon dia mampivoitra ny rehetra tsy manampaharoa mikasika ny fankalazàna ny Noely ao amin'ilay ampahany natao ho anay ao anatin'ny tontolo: eo anelanelan'ny poinsettias mena sy ireo vifotsy fitehirizana, ny menaka poix, ny hira dia malefaka mampanembona an'ilay Trinidad fahiny, ary maka an'ireo majikan'ilay andro fety avy any anatin'ny mason'ny zaza iray. Io no fototsakafo romantika mahafinaritra izay mampihovitra anao hatrany amin'ny fiantombohan'ireo fikarakaranao ny Noely.
3. La Gaita — Lara Brothers
Ity tarika maroloko ity, ho an'ny mozika parang no karazana gadona pop/rock nataon'ny The Beatles. “Sodina” no dikan'ny lohatenin'ilay hira raha amin'ny teny espaniôla, saingy tsy feon’ny Scottish Great Highland akory io. Nefa kosa, ireo fitaovana misy tadiny (cuatro sy gitara) dia nisarika ny mpihaino, raha toa ireo ‘claves’ (fantatra amin'ny anarana hoe ‘toc toc’) sy ny vata mibogon'ireo indizeny izay mamaritra ny parang, dia mitàna tsy miova ny gadona mahazatra an'ireo vahoaka metisy amerikana-indiàna, latino-amerikàna ary afrikàna mifangaro. Na dia tsy mahazo ny teny espaniôla aza ianao, dia hahasarika anao ny famirapiratry ny zavamaneno.
4. Horààà, Horààà — Hiran'i Francine
Ny feon-gitara miverimberina miavaka izay mampiditra an'io hira io dia mametraka koa the Grinch ho anaty fahamiramiranana. Azon'i Francine tsara ny antom-pisian'ilay tonontaona: “Horààà, horààà, horààà, hoy ry zareo, teraka anio ny Mpamonjy antsika”. Ivelan'ny feo mamin'i Francine, ny mampiavaka manokana an'io hira io dia ny hafany ara-pivavahana araikitra amin'ny gadona izay manasa anao handihy, ka mahatonga azy hanana endrika tena Trinbagoniàna.
5. Horààà, Horààà— Daisy Voisin
Tsy azo afangaro amin'ny fanatitra atolotry ny hiran”i Francine, ity no mpanjakavavin'ny parang ao anatin'ny hatsarany. Alain'ny feo maditidity sy matanjaka an'i Voisin ny fifehezana ary tarihany ho an'ny amin'izay ilaina ho alehany ilay hira. Tsy misy sampona ny teny Espanola-ny, azo tsapaina ny hafaliany. Rehefa redoniny miaraka amin'ilay soniany “Ohhhhhhhhhhh…”, naoty iray mifilofilo izay mitarazoka eo amin'ireo fivelivelesana tsy tapaka sy ireo horakoraka avy any aoriana, manontany tena ianao hoe ahoana no hahafahan'ny Noely handalo tsy misy ny mozika parang mitobaka.
6. Manodidina ny Hazo Noeliko — Lennox Grey
Na ny feo kely mibahana ao an-tsaina sy firedona lakolosim-piangonana izany, ny feo manankarena an'i Grey na ny sarintsarin'ny Noely ao Karaiba, tsy isalasalana fa iray ankafizina io. Feo iray izay avy ao anatiny no mihiratra ny hafatry ny Noely mamakivaky an'ireo hazakaza-dava isanandro – ireo ankizy mihomehy misingtontsintona an “Ing. Noely”, ireo fofona mihanaka avy ao an-dakozia, ireo fanomezana sy ny fanolorana – dia samy manao ny hira ho iray amin'ireo be mpangataka indrindra amin'ilay vanim-potoana.
7. Ah Mila Sombina Hena Kisoa — Scrunter
Ny zavatra andrandrain'ireo Trinis marobe mialoha ny Noely no mamahana ity fiverenana andininy mampitsamboamboatra an'i Scrunter ity, izay mpiangaly calypso misongadina amin'ny fampifangaroana tsara ny soca/parang. Inona no iriany ho an'ny Noely? “Sombinà Hena kisoa iray”, izay fotsiny. Tsy misy manicou, tsy misy callaloo, omeo an'ingahy io fotsiny ny jambon-ny. Tena mahaliana, na miresaka ny natsipirihany aza ity hira ity dia tena mbola miresaka ny finamanana mihitsy, ny fifampizaràna sy fandavantena tsara izay miseho amin'ny fotoanan'ny Noely.
8. Noely any amin'ny Sesame Street — Relator
Tonga dia mandramby avy hatrany an'ireo zazakely io fampisehoana kely hafahafa sy mahafinaritra io – ary koa, mihomehy tsy tàna ireo olon-dehibe. Raha lazaina avy amin'ny fomba fijerin'i Oscar the Grouch, miady mafy ho an'ny fanahin'ny Krismasy izy: “tsy misy Dadabe Noely antitra izany, “azonareo raisina io anatr'i Oscar io, tsy misy Noely eo amin'ny Sesame Street. ” Sady izao koa, tsy ny olona rehetra no manao Noely, ary io no iray amin'ireo hira vitsivitsy ahafahanao maneho toetra kizintina (na dia amin'ny farany aza, tonga i Oscar).
Ao anatin'ireo fandraisana anjara azo avahana nentin'i Relator mikasika ny Noely, marihinay ny ““Anareo ny Noely, Ahy ny Noely“, sy ny “Tavoahangy sy Sotro” – antsa iray amin'io “zava-maneno” tsy niangaliana io, izay manome ny parang (sy ireo endrika mozika karibeana hafa) ny fahafahana mahazo azy sy, raha hitarina, ny fony.
9. Krismasy izao — Baron
“Ny lehilahin'ny soca malefaka”, Baron araka ny fahafantarana azy, dia mampifangaro ny soca sy ny parang ao anatin'io hira maha te-ho tia io. Avy amin'ny fiantsoana ny manodidina azy sy ny fanangonana “voasary makirana maintso” (fenoina amin'ny alikaola mifanaraka amin'izay ilaina), mankamin'ny fiverenana mahafaly hoe ““Oy yo yo, ay yay yay”, tsy vita ny tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fanahin'ny Noely. Sady izao e, “Noely izao… Arahaba nahatratra ny Noely!”
Baron koa manome voninahitra ny parang ao anatina fantina hafa momba ilay vanim-potoana, “Come Go”, izay iezahany mizara ny fitiavany ny mozika miaraka amin'ny maha-izy azy hafa, mandrapaha-voafafa azy roa.
10. Noely an-tampon-kavoana — Johnny Gonsalves sy ny nàmany, mihira an'i Nigel Ferreira
Tsipahan'ity hira ity ilay fanitarankevitra hoe “White Christmas” (Noely Fotsy) izay namonto ny fitantarana ilay kolontsaina fanta-daza tamin'ny vanim-potoan'ny fety faran'ny taona. “Tsy misy ranomandry mirotsaka, tsy misy voankazo (châtaignes) natono, tsy misy afo manjelatra ao an-trano”, manomboka ny hira, avy eo arahin'ny fanazavana fa eo amin'ny toerana izay “ahatsapanao fa tsy vahiny ianao”, eo no Noely”. Ny hafatra dia hoe ivon'ilay fety ny fitiavana sy ny fiatiana. Antsa iray ho an'ny fahatsiarovana an'ireo mpanoratra hiran'ny Noely tamin'ny fahazazàna, feno fanantenana, hafaliana ary fankasitrahana… ary moa tsy ho amin'izany ve ilay tena Noely?
Fanamarihan'ny mpamoaka lhatsoratra: Ny ampahany amin'ity lahatsoratra ity dia navoaka tato ary avy eo navaozin'ny Global Voices.